သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ချုပ်အပ် -> လူပျိုအပ်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan လူပျိုအပ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ: DPX1，DPX5，DPX16，DPX5MR，DPX17，DPX35，DPX35 LR，DPX35 S，DPX35 DIA
size: 11/75 ~ 18/110
Equivalent Systems: 135X1, SY1451, 354
machine: Lockstitch စက်
ဒါဟာမြန်နှုန်းမြင့် buttonhole စက်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ ဖိနပ်အသီးဘာသာစကားကိုပြောသောကြိုးနှင့်အထွေထွေအပ်ချုပ်သီချုပ်။ ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့ button ကိုမျက်စိသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောလက်, ရှူးဖိနပ်, အိတ်ပေါ်ပြီးချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 135X1, SY1451, 354 ။
Size: 07/55 ~ 25/200
Equivalent Systems: 135X5, 135X7, 135X25, 797, 134 (R), 135X7ELSE, SY1901
machine: Lock ကိုချုပ်စ​​က်, ဘလော့ Post Bed စက်
တစ်ခုတည်းအပ်နဖားကိုပို့စ်အိပ်ရာစက်, အလတ်စားလေးလံသည့်ပစ္စည်းများချုပ်အဘို့အ Lockstitch m / c ကိုအဘို့, တစ်ခုတည်း / ကို double တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အိပ်ရာ post ။ အရွယ်အစားထိုကဲ့သို့သောအားကစား, အလုပ်လုပ်ရှူးဖိနပ်, အပန်းဖြေရှူးဖိနပ်, ရေမြှုပ် (အမြှုပ်ရော်ဘာတစ်ဦးတည်းသော pads), ကလေးရှူးဖိနပ်, သားရေရှူးဖိနပ်အကြီးတန်းအဖြစ်ရှူးဖိနပ်အမျိုးမျိုး, များအတွက်သင့်လျော် 14 # ~ 20 #, အကြောင်းမူကား, ခရီးဆောင်အိတ်, leatherwear, အဝတ်, ရှူးဖိနပ်, ဦးထုပ်, pads, နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပစ္စည်းများများအတွက်သင့်လျော် 24 # အရွယ်အစား 20 #, အရွယ်အစားအားကစားဖိနပ်ကိုများအတွက်သင့်လျော် 16 # ~ 21 #, ဖိနပ်, Bun ရှူးဖိနပ်, အမျိုးသမီးဖိနပ်လက်ကိုင်အိတ်, ဦးထုပ်နှင့်အိတ်ကိုစီး။ Equivalent စနစ်များ: 135X5, 135X7, 135X25, 797, 134 (R), 135X7ELSE, SY1901 ။
Equivalent Systems: 135X16 တခုဖြစ်တဲ့ NW
machine: Post ကို Bed စက်
သပ်ပွိုင့် ": P" နဲ့အပ်။ Post-အိပ်ရာစက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ထိုသို့သောရှူးဖိနပ်, အိတ်, အဝတ်သေတ္တာ, ပရိဘောဂ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအဖြစ်သားရေအတွက်ပစ္စည်းများအမျိုးအစားအားလုံးကို, များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 135X16 တခုဖြစ်တဲ့ NW ။
size: 18/110, 21/130
Equivalent Systems: 135X5MR
အလယ်အလတ်လေးလံသည့်ပစ္စည်းများချုပ်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးအပ်ပို့စ်အိပ်ရာစက်, Lockstitch စက်, Single / ကို double တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အိပ်ရာ post ။ ထိုကဲ့သို့သောအားကစား, အလုပ်လုပ်ရှူးဖိနပ်, အပန်းဖြေရှူးဖိနပ်, ဘွတ်ဖိနပ်ကိုစီးရေမြှုပ် (အမြှုပ်ရော်ဘာတစ်ဦးတည်းသော pads), ကလေးရှူးဖိနပ်, သားရေရှူးဖိနပ်အကြီးတန်း, ခရီးဆောင်အိတ်, သားရေ wear, အဝတ်, ဦးထုပ်, pads, နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပစ္စည်းများအဖြစ်ရှူးဖိနပ်အမျိုးမျိုး, များအတွက်သင့်လျော် , Bun ရှူးဖိနပ်, အမျိုးသမီးဖိနပ်လက်ကိုင်အိတ်။ အဆိုပါအပ်နဖားကိုကွေးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကိုကြင်နာသည် ဖြစ်. , ခွန်အားကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပါချုပ်ခုန်ကြသည်သည်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပ်ချုပ် .Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 135X5 MR ။
Point: R / Kn / BP ရေနံကုမ္ပဏီက / Suk / LR
size: 09/65 ~ 25/200
Equivalent Systems: 135X17, SY3355
machine: sitich စက် Lock, ဘလော့ Post Bed စက်
တစ်ခုတည်းအပ်နဖားကိုမြန်နှုန်းမြင့်ချုပ်, စက်သော့ခတ်စပ်စာ lockstitch စက်, toecap တွန့်စက်, တစ်ခုတည်းအပ်နဖားကို Boot တက်ကြီးမားသောငါးမျှား lockstitch စက်, လူပျိုအပ်နဖားကိုထိပ်တန်း & အောက်ခြေအစာကျွေးသည်။ ထိုသို့သောတဲများ, ကင်းဗတ်, ကုလားထိုင်ကူရှင်တွေ, သားရေကဲ့သို့, လေးလံသည့်ပစ္စည်းများများအတွက်သင့်လျော်သောကွဲပြားခြားနားကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့်သားရေများများအတွက်သင့်လျော်မယ့်ပိုက်ဖိနပ်ကိုဖွဲ့စည်း, လက်ကိုင်အိတ်, ခါးပတ်နှင့် tubular ဆိုဖာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, ဖိနပ်နှင့် Moccasin ရှူးဖိနပ်အပေါ် toecap creasing လက်အိတ်နှင့်ခရီးဆောင်အိတ်တူအလတ်စားလေးလံသောပစ္စည်းများအတွက်ခရီးဆောင်အိတ်, ခရီးသွားလာအိတ်တဲ, leatherwear, ဒါမှမဟုတ် leatherette များအတွက်သင့်လျော်သောအဝတ်ကိုဝတ်, လက်အိတ်, ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 135X17, SY3355,
size: 9/65 ~ 23/160
Equivalent Systems: 134-35 (R), SY7225, 2134-35 (R)
ဒါဟာအပ်ချုပ်သားရေများအတွက်သင့်တော်ပွိုင့်အသုံးပြုခြင်းဖြတ်တောက်နှင့်အတူ Post ကို Bed စက်အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာ PFAFF & Adler စက်မှုအပ်ချုပ်စ​​က်များအများအပြားမော်ဒယ်များကိုက်ညီ, Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 134-35 (R), SY7225, 2134-35®။
Size: 12/80 ~ 23/160
Equivalent Systems: 134-35 LR, 2134-35 LR
ဒါဟာပို့စ်အိပ်ရာအပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကိုသားရေအဘို့ဖြစ်၏။ လက်ဝဲဘက်လှည့်ကွက်အမှတ် "ll" ပြောင်းပြန်လှည့်ကွက်အမှတ် "LR" နဲ့အပ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 134-35 LR, 2134-35 LR ။
DPX35 S က
Size: 12/80 ~ 23/160, 26/230
Equivalent Systems: 134-35 S က, SY7228, 2134-35S
ဒါဟာသားရေအမျိုးအစားအားလုံးကိုများအတွက်သင့်လျော်ပို့စ်အိပ်ရာစက်, S ကပွိုင့်နှင့်အတူဆေးထိုးအပ်, အဘို့ဖြစ်၏။ ကြမ်းတန်ဆာဆင်ချုပ်ရိုးတွေနဲ့စတာတွေဖိနပ်, ခါးပတ်များ, ကြိုးနှင့်အိတ်ထုတ်လုပ်ခြင်း, အဝတ်သေတ္တာ။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 134 - 35 S က, SY7228, 2134-35 S.
DPX35 က DIA
Point: က DIA / D / SD နဲ့
Equivalent Systems: 134-35DIA, 2134-35DIA
ထိုသို့ပို့စ်အိပ်ရာစက်က DIA / D / SD နဲ့ပွိုင့်က The က DIA ပွိုင့်နှင့်အတူဆေးထိုးအပ်အဘို့ဖြစ်၏စိန်ပွိုင့်ဆေးထိုးအပ်သည်။ ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာခြောက်သွေ့ခက်သားရေများအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 134 - 35 က DIA, 2134 - 35 က DIA ။
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ကို အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို : DBX1，DBX95，DBXF2，DBXF17
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ကို အပ်နဖားကို : DCX1
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်စ​​က်အပ်နဖားကို : DIX3
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> လူပျိုအပ် : DPX1，DPX5，DPX16，DPX5MR，DPX17，DPX35，DPX35 LR，DPX35 S，DPX35 DIA
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်စ​​က်များအပ်နဖားကို : DVX63
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်မှုအပ်နဖားကို : UY154GAS，UY118GAS，UY118GBS，UY118GHS，UY121GBS，UY128GAS，UY128GBS，UY118GCS，FLG-2
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ကွေးအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို : DYX100
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> လြယ္ကူဆွေးနွေးချက်အပ်ချုပ်အပ်နဖားကို : TFX2 LR /TFX287 LR，TFX2 D /TFX287 D
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> လူပျိုအပ်နဖားကိုပြားချပ်ချပ် : TFX6
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်ပညာကိုဆေးထိုးအပ် : UNX154
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> သံမဏိအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို : UOX154
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပ်ချုပ်စ​​က်အပ် : 134EL，134D，134DIA，134 LL，134 LR，134 PCL，134 S，134P
Single Needle Lockstitch | Steppstich | Одноместный иглы челночного стежка | de Agulha única | Ago singolo punto annodato | एकल सुई जोड़ | Agujas de CoseraMaquina | واحدة إبرة تعمل بالدرزة المتشابكة | đơn kim | เข็มเดี่ยวลิ้ม | Satu jarum Lockstitch | একা সুই Lockstitch | Tek İğne Kilit Dikiş | ម្ជុលនៅលីវ | လူပျိုအပ်	|job search